Bogga ugu weyn 13 Shirkadaha ugufiican ee bixiya Caymiska Xayawaanka ee 2022
caymiska xayawaanka ugu fiican
Helitaanka caymiska xayawaanka rabaayada ah wuxuu joogteyn karaa kharashyada marka aanad dhaqaale ahaan degganayn. Daryeelka xayawaanku waxay u baahan tahay fiiro gaar ah iyo helista caymisku waa mid ka mid ah siyaabaha. Marka kuwa soo socda ayaa ah shirkado bixiya caymis xayawaan oo tayo leh.
Runtii qaado waqtigaaga si aad u hesho akhrinta!
1.Figo: Halkan shirkadda fadhigeedu yahay Illinois waxay bixisaa habab casriyeysan oo ku aaddan caymiska xayawaanka, iyadoo bixineysa astaamo sida 24/7 ku-sheekaysiga xayawaanka nool, sheegashooyinka internetka, iyo ilo kale.
Sidaa awgeed, Figo wuxuu hubiyaa sanduuqyada jirada iyo dhaawaca Si loo daboolo, oo loo yeesho heerar badbaado miisaaniyaddaadu waxay ku habboonaan kartaa si dhakhso ah, waqti u rog bixinta lacag -sheegashada iyo sidoo kale daboolidda xaaladaha dhaxalka iyo dhasha, oo ay ku jiraan dysplasia misigta, iwm.
Figo wuxuu ganacsi ku jiray toddobo sano wuxuuna leeyahay qiimeynta Better Business Bureau (BBB) ​​ee B+ oo leh siyaasado ay qoreen Shirkadda Caymiska Ameerika ee Madaxbannaan.
A. Waxaa jira caymis shilalka iyo jirrooyinka laakiin ma jiro ikhtiyaar qorshe caafimaad.
B. Qiimaha qorshayaasha bil kasta: Waxay bixiyaan saddex heer oo ilaalin ah: Muhiim, La Doorbiday, iyo Ugu Dambeyn. Heerarka Jack Russel Terrier oo ah hal sano jir ayaa laga soo xigtay $ 35.57, $ 39.62, iyo $ 41.14 bishiiba, siday u kala horreeyaan. Waxaad u habayn kartaa dheefahaaga adoo dooranaya $ 100, $ 250, $ 500, ama $ 750, oo leh ikhtiyaarrada lacag -bixinta oo u dhexeeya 70% ilaa 100%.
C. Waxaa jira wakhti sugitaan, markaa waa inaad sugtaa saddex maalmood caymiska shilka ama dhaawaca, 14 maalmood xanuun, iyo 6 bilood xaaladaha jilibka.
D. Siyaasadda sannadlaha ahi waa macaashka ugu badan ee cimrigiisu wuxuu u dhexeeyaa $ 5,000 iyo $ 200,000 halkii xayawaanba, iyo macaashka ugu badan ee sannadlaha ah ee xayawaanku wuxuu u dhexeeyaa $ 1,000 iyo $ 20,000.
Kala duwanaanshaha daboolida siyaasadda:
Halkaan kuma daboolayaan cuntada laguu qoray, fayoobaanta ama xereynta, ama nadiifinta ilkaha.
Trupanion waxay bixinaysay caymiska xayawaanka ilaa 2000 waxayna ku ilaaliyaan bisadaha iyo eyda kaalmada 24/7 ee joogtada ah iyo dheefaha aanan ka helin caymis -yaasha kale ee xayawaanka. Laba sifo, gaar ahaan, waxay wax weyn ka beddeli karaan daryeelka xayawaankaaga:
Lacag-bixinnada waxay ku saleysan yihiin da'da is-qoritaanka, ee ma aha da'da dhalashada, taasoo la micno ah mar haddii aad caymisid eey laba jir ah, tusaale ahaan, sicirkaagu waa isku mid xataa marka eeygaagu noqdo 10 jir. Shirkadaha kale ee caymiska xayawaanka ayaa laga yaabaa inay dib -u -eegaan ama joojiyaan caymiska qorshaha marka la cusboonaysiinayo markay bixiyaan kharashyada xaaladaha caafimaad qaarkood laakiin Trupanion ma sameeyo tan.
Trupanion waxa uu leeyahay qiimaynta BBB ee A- laakiin waxa uu lahaa laba tallaabo oo dawladeed oo iyaga ka dhan ah: mid u bixinta hadiyadaha bixiyayaasha daryeelka xayawaanka loogu talagalay gudbinta, kaas oo lagu xaliyay bixinta ganaaxyo, iyo mid kale iibka California ee wakiilada caymiska aan shatiga u haysan.
Qiimaha qorshayaasha billaha ah: Qiimayaashu aad ayay u sarreeyaan marka la barbardhigo caymisyada kale, gaar ahaan kuwa xayawaanka rabaayadda ah, kuwa ka yar saddex sano.
Kala duwanaanshaha daboolida siyaasadda: Trupanion wuxuu bixiyaa faa'iidooyin ka duwan caymisyada kale ee xayawaanka, sida dysplasia misigta iyo dhammaan xaaladaha la iska dhaxlo iyo kuwa lagu dhasho oo aan lahayn astaamo hore u jiray daaweynta jireed, iyo daaweynta baxnaaninta.
Ma haystaan ​​dabool siyaasadeed oo ka duwan Figo.
3.Baabo caafimaad qaba: oo ugu fiican eeyaha iyo bisadaha
Healthy Paws Pet Insurance & Foundation wuxuu jiray ilaa 2009. Aasaasayaashu waxay ku kulmeen hoy xayawaan oo aan la dilin iyadoo labaduba ay rabeen inay helaan hab ay ku siiyaan waalidiinta xayawaanka ah habkii loo heli lahaa daaweynta xoolaha ee tayada leh.
Healthy Paws waxay leedahay qiimeynta BBB ee A+ waxayna bixisaa caymis iyada oo loo marayo laba ka mid ah caymisyada ugu waaweyn adduunka, Aon Affinity Programs iyo Ace Chubb Insurance Group, oo labaduba caan ku ah barnaamijyada caymiska guriga ee qiimaha badan.
Mulkiilayaashu waa inay sugaan 15 maalmood shil ama sheegashooyinka jirada iyo 12 bilood sinta dysplasia ama arrimaha la xidhiidha.
Waxaa jira lacag-bixin sanadle ah halkii laga bixin lahaa shuruud kasta oo aan lahayn lacag-bixinnada ugu badan.
Paws Healthy waxay siisaa kala duwanaanshaha daboolida shilal, xanuunno, iyo dhaawacyo cusub. Lacag-dhimista caymiska iyo qaddarka wada-bixinta ayaa xaddidan marka xayawaanku weynaado.
Shuruudaha bixinta dheefaha: Paws Healthy waxay bixiyaan 99% sheegashooyinka laba maalmood gudahood.
Paws Healthy wuxuu siiyaa qiime weyn eeyaha iyo bisadaha labadaba ilaa 90% kharashyada lagu bixiyo sheegashooyinka la daboolay.
4. Xayawaanka ugu Fiican:
Pets Best waxaa aasaasay 2005 dhakhtar xoolaad ah Dr. Jack Stephens, oo bilaabay shirkaddii ugu horraysay ee caymiska xayawaanka ee Waqooyiga Ameerika sannadkii 1981. Waxay bixiyeen in ka badan $ 200 milyan oo sheegashooyinka dadka siyaasadda leh waxayna hadda caymiyaan in ka badan 100,000 oo xayawaan ah gudaha US14 Waxay leeyihiin Qiimaynta Xafiiska Better Business ee A+.15
Shirkadu waxay bixisaa caymis xayawaan oo aad ku shaqsiyeyn karto heerar kala duwan oo ilaalin ah iyo xulashooyin kale oo lagu daro si kor loogu qaado fayoobaanta xayawaankaaga. Adeegyada saaxiibtinimada leh waxay ka caawiyaan Xayawaanka ugu fiican inay u istaagaan sidii qiimo weyn, sida 5% dhimis milateri iyo 5% dhimis marka aad caymisid laba ama in ka badan oo xayawaan guri ah. saldhig u ah, si aad uga tanaasusho muddooyinka sugitaanka markaad ka beddesho xayawaan kale.
Ikhtiyaarada laga jari karo waa $ 50, $ 100, $ 200, $ 250, $ 500, iyo $ 1,000, waxaadna dooran kartaa heerarka caymiska 70%, 80%, ama 90%.
Muddada sugitaanka shilalka waa saddex maalmood, 14 maalmood cudurro, iyo lix bilood xaaladaha isgoysyada.
Waa maxay koofiyadaha siyaasadda sannadlaha ah? Pets Best waxay kuu oggolaaneysaa inaad doorato mid ka mid ah afarta xadka siyaasadda sanadlaha ah: $ 2,500, $ 5,000, $ 10,000, iyo ilaa dabool la'aan.
Kala duwanaanshaha daboolida siyaasadda: Xayawaanka ugu fiican wuxuu bixiyaa Khadka Caawinta 24/7 Vet. Daboolistooda waxaa ka mid ah shilal, jirrooyin, kansar, xaalado dhaxal ah, daryeel degdeg ah, iyo qalliinno. Qorshaha Plus waxaa kaloo ku jira khidmadaha imtixaanka. Caynsanaanta Elite waxaa ka mid ah dhaqan -celinta, akupuncture, iyo daboolista muruqa. Gargaarka dawooyinka dhakhtar qoray ayaa sidoo kale lagu dari karaa ama lagu dari karaa.
Ma la daboolay alaab ka hortag ah? Caymiska fayoobaanta kuma jiraan, laakiin barnaamijyada daryeelka ka -hortagga ikhtiyaariga ah ayaa la heli karaa qiyaastii $ 20 bishii.
Shuruudaha lacag -bixinta faa'iidooyinka: Xayawaanka ugu Fiican wuxuu u oggolaanayaa dhowr ikhtiyaar oo dhijitaal ah inay dalbadaan. Waxaad ku soo gudbin kartaa sawir qaansheegtaada xoolaha adiga oo adeegsanaya barnaamijka ama ku soo rogi kara qaansheegta internetka. Waxaad ku soo diri kartaa emayl ama boostada, sidoo kale.
Waxa aan jecelahay: Sababtoo ah Xayawaanka ugu Fiican ayaa kuu oggolaanaya inaad habaynaysid caymiskaaga, waxaad awoodi kartaa inaad iibsato oo aad iska bixiso xulashooyinka adiga iyo xayawaankaaga ugu muhiimsan, adiga oo siinaya Xayawaanka ugu fiican noodhka qiimaha ugu fiican.
PetPartners Inc. , Inc., waxay leedahay qiimeynta Xafiiska Better Business ee A+.
1 sano: $ 50.22 eey; $ 56.40 bisad3 sano: $ 50.06 eyga; $ 56.22 bisad6 sano: $ 65.09 eey; $ 87.72 bisad
Muddada sugitaanku waa 14 maalmood oo xanuun ah, laba maalmood shilalka, iyo 180 maalmood xaaladaha la xidhiidha xididada.
Waxaad ka dooran kartaa qorshayaal kala duwan oo bixiya xadka sannadlaha ah ama faa'iidooyinka sannadlaha ah ee aan la daboolin. Tusaale ahaan, caymiska aasaasiga ah waxaa ka mid ah $ 500 xadka dhacdada kasta. Xadka ugu sarreeya ee ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah, dhammaystiran, ama daboolidda habdhaqanku waa $ 1,000.
Daboolida xaaladda dhaxalka iyo dhalashada kuma jirto, laakiin waxaa lagu dari karaa ikhtiyaarka qorshahaaga. Waxa kale oo aad dooran kartaa inaad ku darto daboollada fayoobaanta oo ay ku jiraan caymiska baaritaanka xayawaanka iyo daryeelka ka -hortagga sida dheef -shiidka ama dhexdhexaadinta iyo nadiifinta ilkaha.
PetPartners waxay siisaa 5% qiimo -dhimis xayawaanno badan oo leh qiimihii hore loogu tartamayay mid kasta oo xayawaankaaga ah.
6. Dalka oo dhan:
Wadanka oo dhan waa caymiska ugu weyn ee xayawaanka ee Maraykanka, oo bixiya caymiska bisadaha, eyda, iyo xayawaanada qalaad. Waxay bixinayeen ilaalintani ilaa 1982 waxayna caymisey in ka badan 780,000 xayawaan rabaayad ah
Barnaamijkooda shimbiraha, xamaaratada, amphibians, iyo naasleyda yaryar waxaa ku jira ikhtiyaarrada caymiska ee ay ku bixiyaan caymiska eeyga iyo bisadaha.
Naasleyda Yar: Chinchillas, gerbils, jiirarka, doofaarrada qallafsan, riyaha, doofaarka guinea, hamsters, heedhogs, doofaarrada yaryar, jiirka, dhalada sonkorta, bakaylaha, iyo biraha. , lory, lovebirds, macaw, mynah, parakeet, parrotlet, toucans, iyo shimbiraha kale. kuwa kale.
Qiimaha qorshayaasha billaha ah: Qorshayaashu aad bay u kala duwanaan doonaan iyadoo ku saleysan noocyada; waxaa fiican inaad wacdo faahfaahin dhammaystiran.
Waxaa jira 14 maalmood oo sugitaan caymis caafimaad ah oo bilaabanaya ka dib marka xeerka la oggolaado oo lacagtaada la helo. Caymiska fayoobaantu wuxuu bilaabmaa 24 saacadood ka dib marka siyaasadda la soo saaro.
Dalka oo dhan wuxuu ku siinayaa faa'iidada aad ku xulanayso xayawaan kasta oo aad u doorato adeegyada. Daboolida fayoqabka ayaa sidoo kale laga yaabaa in lagu daro qorshayaashooda. Haddii xayawaankaaga la qoro ka hor da'da 10, waxaa la damaanad qaadayaa caymis ilaa iyo inta aad bixinayso lacagta caymiska.
Lacag sheegashada elektaroonigga ah ayaa la heli karaa. Dalka oo dhan waxay qaadataa ilaa 30 maalmood in sheegashooyinka la dhammaystiro ka dib markay helaan dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah.
Faa'iido ka badan caymis -bixiyayaasha kale, Nationwide waxay samaysay siyaasado lagu daryeelo xayawaanno badan oo aan caadi ahayn oo laga yaabo inay qayb ka yihiin qoyskaaga. Tani waxay ka dhigaysaa booskooda sida ugu fiican xayawaanka qalaad.
Post la xiriira: Ganacsiga Ka Saarista Qashinka Xayawaanka ee 2022: Sirta ku saabsan sida loo bilaabo Sameynta $ 75/saac
7. Caymiska Caafimaadka Xoolaha ee ASPCA ee Fardaha:
Caymiska xayawaanka aasaasiga ah ee faraskaaga, ASPCA Caymiska Caafimaadka Xoolaha wuxuu bixiyaa dabool dhammaystiran, oo leh colic, shil, jirro, iyo ikhtiyaarada daboolidda fayoobaanta.
Barnaamijka ASPCA waxaa maamula C&F Caymiska, Inc., oo ah hay'ad caymis shati leh oo la aasaasay 1822, oo khibrad u leh qorista alaabta caymiska ilaa 2006.
Halkaan waxaa ku jira muddo 14 maalmood oo sugitaan ah ka hor intaan caymiska la bilaabin.
Caymiska waxaa ka mid ah cudurrada ilkaha, arrimaha dabeecadda, xaaladaha la iska dhaxlo, khidmadaha imtixaanka, baarista, iyo daaweynta shilka ama jirada.
Waxa xiiso leh, dib -u -bixinta waxaa lagu heli karaa deebaaji toos ah ama jeeg ayaa lagu soo mariyaa boostada. Ka baaraandegidda sheegashooyinka waxay qaadataa 14 illaa 16 maalmood.
ASPCA waxay u adeegtaa caymis gaar ah oo loogu talagalay fardaha xayawaanka halkaas oo bixiyeyaasha caymiska kale ay ula dhaqmaan sidii xoolo aan lahayn caymis. Tani waxay ka dhigaysaa ASPCA Caymiska Caafimaadka Xoolaha kuwo kale.
Kooxda caymiska beeralayda waa koox caymis Mareykan ah oo baabuur, guri, iyo ganacsiyo yaryar ah. Waxay sidoo kale bixiyaan kuwa kale…